na- 33% Off maka afọ mbụ. Kupọn koodu - 33LESS. Obere oge na-enye.
Hụ Nduzi Na-efu
Ọnụahịa dị mfe & ọnụ ọnụ
Gaa na Omuma Suite
Tinye ahịa gị na autopilot
Ezigbo Customizable CRM
Enwere ike ịhazi aha ụlọọrụ Company maka ụlọ ọrụ gị dịka ịdọrọ-na-dobe
Ngwongwo kachasị ahịa ahịa
Email Email, Mail Bulk, Unlimited Email Ndepụta (Ọbụna site na Gmail), Ịhazi & Chetara ọ bụrụ na ịzaghị azịza.
Nweta ihe omuma gi choro na ntinye. Na-akuko banyere ihe ọ bụla
naanị $ 24
Kwa onye ọrụ / ọnwa (a na-akwụ ụgwọ kwa afọ)
$ 32 kwa ọnwa
Gbalịa ụbọchị 14 maka Free
Enweghị kaadị akwụmụgwọ achọrọ.
Kedu ka ọrụ 14 na-enweghị n'efu si arụ ọrụ?
Ọ dị mfe. Ozugbo i mepụtara akaụntụ Ụlọ ọrụ CompanyHub ị nwere ike itinye ọtụtụ ndị ọkachamara dị ka ịchọrọ. Ị ga-enwe ike ịnweta ụdị ụlọọrụ CompanyHub niile. Mgbe 15 gasịrị, ịnwere ike ịhọrọ maka otu n'ime atụmatụ Ndenye Ọnwa ma ọ bụ Kwa afọ.
Enwere m ike inyocha CompanyHub na ndị ọrụ m n'oge ikpe ahụ?
Ị nwere ike ịkpọ ndị ọrụ ibe gị ka ha soro na akaụntụ Ụlọọrụ CompanyHub. Anyị na-ekwusi ike na ị na-ekepụta akaụntụ njirimara ọtụtụ dịka ọ bụ ụzọ kachasị mma isi mee ka ọ bụrụ ihe kachasị n'ime ikpe gị. Naanị pịa bọtịnụ ndị na-akpọ ndị ọrụ na-akpọ gị otu.
Nchedo nke data gị bụ nchegbu anyị kachasị mkpa, ọ bụ ya mere anyị ji eji sava ndị echekwara na saịtị ndị na-echekwa ego iji nweta data ha. Ị nwere ike ịgụtakwu banyere ya na ibe anyị Data & Security
Enwere ihe ọ bụla ọzọ anyị nwere ike inyere gị aka?
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ metụtara CompanyHub ma ọ bụ ihe ọ bụla dị na ya, biko nweere onwe gị ịchụrụ anyị aka nkwado@companyhub.com na Team anyị ga-enwe obi ụtọ ịza ajụjụ gị niile.